Seluzoqhubeka olwezindlu ezingaqedwanga eVulindlela | News24
Seluzoqhubeka olwezindlu ezingaqedwanga eVulindlela
ISITHOMBE: SITHUNYELWEKungesikhathi uMnu Ravi Pillay ekhuluma nomphakathi waku-ward 9 ngoLwesine.
UNGQONGQOSHE wezokuHlaliswa kwaBantu esifundazweni iKwaZulu-Natal uMnuz Ravi Pillay uvule ngokusemthethweni uhlelo lokwakhiwa kwezindlu zomxhaso endaweni yakaVulindlela.
Lolu hlelo luvulwe ngokusemthethweni ngoLwesine olwedlule mhlaka-1 kuLwezi (November) eMafakatini ku-ward 9 ngaphansi kukaMasipala uMsunduzi.
Besekuphele iminyaka engaphezu kweyisihlanu lwamiswa loluhlelo kanti imizi eminingi ibisele nezilebhu kuphela nokwathi ngesikhathi luqalwa kwafakwa zona kuphela kwaqede kwashiywa kanjalo.
Ngaphansi kwalolu hlelo kwakumele kwakhiwe izindlu ezingama-25 000 kanti zingama-21 000 esezakhiwe kanti ezingu-2 600 zakhiwe ku-ward 9 (eMafakatini).
UMnuz Pillay ufunge wagomela ukuthi ayikho enye into esazovimba okanye ibambezele ukuthi lolu hlelo luqhubeke luze lufike emaphethelweni.
“Uma ngabe wenza uhlelo olukhulu njengalolu kuyaye kube khona amaphutha enzakalayo. Kulesi simo ngesikhathi kwenziwa lolu hlelo abantu base befaka izilebhu eziningi emizini eyahlukene ngoba base bejahe ukuba luphothulwe yize kwakungakasayindwa wonke amaphepha afanele. Kwaphoqeleka ukuba lolu hlelo lumiswe ngoba sasifuna ukuthi yonke into ihambe ngokomthetho yingakho kwakumele lumiswe kulungiswe amaphepha kuqala.
“Kodwa namhlanje siyakuqinisekisa ukuthi lolu hlelo seluzoqhubeka angeke luze lusaphazamiseka kuze kube lufika emaphethelweni. Zonke izindlu ezashiywa zingaphelile zizolungiswa zakhiwe zonke ziqedelwe,” kubeka yena.
UMnu Pillay uthe ngesikhathi lolu hlelo luqala lwakungamayelana nodaba lwezindlu kuphela kodw afuthi kwakuhloswe ukwakhiwa ngalo ubumbano emphakathini.
“Lolu hlelo bekungenye indlela yokuletha uzinzo emiphakathini kanye nakubaholi ngemuva kwezikhathi ezinzima zodlame ngeminyaka yabo-1990. Olunye lwezinhlelo ezingajwayelekile lapho uthola khona ukuthi amalunga omphakathi abamba iqhaza elikhulu ngesikhathi zakhiwa njengoba kwaqashwa abantu abalinganiselwa ezi-2 000,” kubeka yena.
Amalunga alo mphakathi athi ajabulile kakhulu ukuthi lolu hlelo seluzoqhubeka futhi ngemuva kweminyaka lukade lwamiswa.
UNks Ntombifuthi Ndlovu uthe: “Besesiqala ukulahlekelwa yithemba singumphakathi ukuthi luyobuye luqhubeke lolu hlelo. Besikubona kuyinto engalungile ukuthi kube khona abanezindlu ekubeni abanye bengenazo kanti futhi ezabanye zingaphelile.
“Le nto ibisizogcina isibanga ukungazwani phakathi kwethu singamalunga omphakthi ngoba besesizoqala ukubuza ukuthi abanjani abathola izindlu. Sijabulile kakhulu,” kubeka yena.